न्यूज सञ्जाल: » मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी !
झापा अर्जुनधाराका २ व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि
नयाँ चाहना समूहद्वारा २ सय परिवारलाई राहत वितरण
पूर्वी नाकामा सेनाको ‘स्क्रिनिङ क्याम्प’
आजदेखि काँकरभिट्टा नाकामा सेना परिचालन गरिँदै
बजार खोल्ने निर्णयबाट पछि हटे झापाका व्यवसायी !
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी !
न्यूज सञ्जाल २८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०८:४३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन्। ओलीले सोमबार बिहान दाहालसँग यो विषयमा छलफल पनि गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच झन्डै दुई घण्टा वार्ता भएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार म्यान्मा भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी छ। ओलीले ६ मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो।
शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखबाट राजीनामा दिन लगाई मन्त्री बनाउने तयारी ओलीको छ। ओलीले सोमबार नै उपसभामुखसँग राजीनामाका विषयमा छलफल गरी मन्त्री पदका लागि तयारी अवस्थामा बस्न भनेको स्रोतले बतायो।
यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा मुछिएका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ। यो पद अन्य पार्टीलाई नछाड्न नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउन लागेको हो। सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेपालमा कोही भोकै नमर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:३८
भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका विद्यार्थी पक्राउ
२७ बैशाख २०७७, शनिबार १४:२२
उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष : लकडाउन अझै थपिने
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १९:०७
पीसीआर परीक्षण झापामै गर्न दलहरुको माग
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १८:५७
कोरोनाविरुद्ध झापाका आठ नगर प्रमुखको १४ बुँदे निर्णय
११ बैशाख २०७७, बिहीबार १९:३३
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:४४
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:१०
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:०२
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:३५
रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई क्वारेन्टाइनबाट घर (भिडियोसहित)
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:११